जर्मनी बिरुद्ध गोल गर्दा मेक्सिकोमा भूकम्प मापन !
२०७५ असार ४ सोमबार, एजेन्सी। विश्वकप फुटबल जारि रहँदा विश्वको ध्यान पुरै फुटबल तिर केन्द्रित रहेको छ। यही समयमा विश्वभरी फुटबलसँग सम्बन्धित अनेक घट्ना घट्ने गरेका छन्। ... बाँकी अंश»
रसियासँग विश्वकपमा डेब्यु गर्दै सलाह
२०७५ असार ४ सोमबार, काठमाडौं । इजिप्टका स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह मंगलबार राति हुने रसियासँगको खेलमा खेल्ने भएका छन् । समुह 'ए' मा रहेको टोलीका प्रमुख स्ट्राइकरले पहिलो खेलमा भने उरुग्वेसँग खेलेका थिएनन् । ... बाँकी अंश»
विश्वकपका लगातार तीन खेलमा ब्राजिल जितविहीन
२०७५ असार ४ सोमबार, काठमाडौं। आइतबार भएको समुह ई को दोस्रो खेलमा ब्राजिल स्विट्जरल्याण्डसँग बराबरीमा रोकिएको छ। पाँचपटकको विश्वविजेता टोलीले यो खेल सहजै जित्ने अनुमान गरिएको भए पनि स्विट्जरल्याण्डले अनुमान गरिएभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको हो। ... बाँकी अंश»
यसकारण खराब इतिहासबाट बच्न सकेन जर्मनी
२०७५ असार ४ सोमबार, काठमाडौं । आइतबार राति भएको खेलमा पूर्व विश्वविजेता जर्मनीले मेक्सिकोसँग १–० गोल अन्तरको हारको सामना गरेको छ । मेक्सिकोको लागि आइतबारको खेल ऐतिहासिक हो । ... बाँकी अंश»
विश्वकपमा जर्मनीको हारको कारण के हुन सक्छ
२०७५ असार ४ सोमबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीले रुसमा भइरहेको विश्वकप फुटबलमा जर्मनीले पराजयबाट यात्रा सुरु गरेको छ । ... बाँकी अंश»
साख जोगाउन दक्षिण कोरिया भिड्दै स्वीडेनसंग, यसो भन्छ ‘हेड टु हेड’ ले
२०७५ असार ४ सोमबार, काठमाडौं । सोमबार विश्वकपको समुह एफ को दोस्रो खेलमा एसियाली मुलुक दक्षिण कोरिया र स्वीडेनको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यो खेलमा स्वीडेन जाल्टन इब्राहिमोभिक विना नै मैदानमा उत्रिँदैछ । स्वीडेनका लागि यो अनौठो कुरा हो । सन् २००६ देखि इब्राहिमोभिक स्वीडेनको टोलीमा थिए तर उनले सन् २०१६को युरोपियन च्याम्पियन्सपछि भने सन्यास लिएका हुन् । ... बाँकी अंश»
ब्राजिल बराबरीमा रोकिनुको कारण यस्तो, नेयमार ‘सेल्फिस’ भयो – राजुकाजी शाक्य
२०७५ असार ४ सोमबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको इतिहासमा सबैभन्दा अब्बल मानिएको टिम ब्राजिल ‘रुस विश्वकप’ को पहिलो खेलमा विजयी हुन सकेन । ब्राजिललाई अर्को बलियो टिम स्वीट्जरल्याण्डले १–१ को बराबरीमा रोक्यो । ... बाँकी अंश»
विश्वकप फुटबलमा सोमबार हुँदै तीन भिडन्त, अहिलेसम्मको यस्तो छ नतिजा
२०७५ असार ४ सोमबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलमा पहिलो चरणका खेलहरु सोमबार राति सकिँदैछन् । पहिलो खेलमा समुह एफ बाट स्वीडेन र दक्षिण कोरिया भिड्दै छन् । ... बाँकी अंश»
ब्राजिललाई बराबरीमा रोक्दै स्विजरल्याण्डले अंक बाँड्यो
२०७५ असार ४ सोमबार, काठमाडौं। रसियामा जारि विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा ब्राजिललाई स्विजरल्याण्डले १-१ गोलको बराबरीमा रोक्दै अंक बाँडेको छ। विश्वकपको संभावित बिजेताका रुपमा हेरिएको ब्राजिललाइ स्विजरल्याण्डले बराबरीमा रोकेको हो। ... बाँकी अंश»
विश्व बिजेता जर्मनी मेक्सिकोसँग स्तब्ध
२०७५ असार ३ आइतबार, काठमाडौं। विश्व बिजेता जर्मनीलाई मेक्सिकोले आफ्नो पहिलो खेलमा १-०ले पराजित गरेको छ। सन् २०१४को विश्वकप बिजेता जर्मनी समुह चरणमा आफ्नो पहिलो गेम गुमाउन पुगेको हो । ... बाँकी अंश»
विश्वकप फुटबलः कोष्टारीका विरुद्ध सर्बिया विजयी
२०७५ असार ३ आइतबार, काठमाडौं। विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको समूह ‘इ’को खेलमा सर्बिया विजयी भएको छ। सर्बियाले कोष्टारीकालाई १-० गोलले पराजित गर्दै विजयी भएको हो। सर्बियाको लागि खेलको ५६औ मिनेटमा क्‍याप्टेन एलेक्जेडर कोलारोबले फ्रि किकबाट गोल गरेका थिए। ... बाँकी अंश»
नेयमारको टोलीलाई रोक्ला त स्विट्जरल्याण्डले ?
२०७५ असार ३ आइतबार, काठमाडौं । आज राति पौने १२ बजे ब्राजिल र स्विट्जरल्याण्डको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । समुह ई को दोस्रो खेलमा यी दुई टोलीहरु आमनेसामने हुन लागेका हुन् । यो समुहमा यी दुई टोलीहरु बलिया टोली मानिएका छन् । जसको कारण पनि यो खेलमा धेरैको ध्यान जानेछ । ... बाँकी अंश»
‘टुटे’ लियोनल मेस्सी, के होला अब
२०७५ असार ३ आइतबार, काठमाडौं । अर्जेन्टिनाका फुटबल स्टार लियोनल मेस्सी टुटेका छन् । उनले रुस विश्वकपको पहिलो खेलमा आइसल्याण्डसंग १–१ को बराबरी नै खेल्नु परेपछि निकै पीडा भोग्नुपरेको हो । ... बाँकी अंश»
जर्मनीले प्रमाणित गर्दै डिफेन्डिङ च्याम्पियन हुनुको भूमिका, भिड्दै मेक्सिकोसंग
२०७५ असार ३ आइतबार, काठमाडौं । आइतबार राति पौने ९ बजे विश्वकप फुटबलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनी र मेक्सिकोबीच समुह एफ को पहिलो खेल हुँदैछ । यो खेल यो समुहको निकै महत्वपूर्ण खेल हो । ... बाँकी अंश»
२०१४ को बदला लिन तयार नेयमार
२०७५ असार ३ आइतबार, काठमाडौं । ब्राजिलियन फुटबलर नेयमार जेआरको अनुपस्थितिमा अघिल्लो विश्वकपको सेमिफाइनमा ब्राजिलले फराकिलो अन्तरको हारको सामना गर्न पुग्यो । यो नतिजाले ब्राजिलका समर्थकहरुलाई स्तब्ध बनाउन पुग्यो । ... बाँकी अंश»
सरप्राइज टोली कोष्टारिका भन्दा बलियो भएर आएकै हो त इतिहास बोकेको सर्बिया
२०७५ असार ३ आइतबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आइतबारको पहिलो खेलमा साँझ ५ः४५ पछि समारा रंगशालामा सर्बिया र कोष्टारिका भिड्दै छन् । ... बाँकी अंश»
भिड्दै विश्वकपका दुई मुख्य दावेदार जर्मनी र ब्राजिल, को होला हावी
२०७५ असार ३ आइतबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलमा आइतबार दुई उपाधिका प्रमुख दावेदारहरु खेल्दैछन् । विश्वकपमा आइतबार तीन खेल हुँदै गर्दा पहिलो खेलमा साँझ ५ः४५ बजे कोस्टारिकाले सर्वियासंग खेल्दैछ । ... बाँकी अंश»
विश्वकप फुटबल: नाईजेरिया बिरुद्ध क्रोएसिया बिजयी
२०७५ असार ३ आइतबार, काठमाडौं। रसियामा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा क्रोएसियाले नाईजेरियालाई २-० गोलले पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गरेको छ। ... बाँकी अंश»
प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पेरु बिरुद्ध डेनमार्क बिजयी
२०७५ असार ३ आइतबार, काठमाडौं। रसियामा जारि विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको समुह 'सी' अन्तरगतको पेरु र डेनमार्क बिचको खेलमा डेनमार्क १-० गोलले बिजयी भएको छ। ... बाँकी अंश»
मेस्सीले पेनाल्टी 'मिस' गर्दा जितेन अर्जेन्टिना, आइसल्याण्डले रोक्यो बराबरीमा'
२०७५ असार २ शनिबार, काठमाडौं । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलमा अर्जेन्टिना बराबरीमा रोकिएको छ । समूह डी अन्तर्गत भएको खेलमा अर्जेन्टिनालाई पहिलो पटक विश्वकप खेलेको आइसल्याण्डले १–१ को बराबरीमा रोक्यो । ... बाँकी अंश»